အလှနျအမငျး ကွောကျနတေဲ့သူကို အကွောကျပွအေောငျ လုပျပေးနိုငျမယျ့ နညျးလမျး (၈) မြိုး
HomeKnowledgeအလှနျအမငျး ကွောကျနတေဲ့သူကို အကွောကျပွအေောငျ လုပျပေးနိုငျမယျ့ နညျးလမျး (၈) မြိုး
H August 28, 2021
ကိုယျနဲ့ ရငျးနှီးတဲ့သူ တဈယောကျယောကျက ထိနျးမနိုငျ သိနျးမရ လောကျအောငျ ကွောကျလနျ့ နတေဲ့အခါ သူ့ကို အကွောကျပွအေောငျ လုပျပေးဖို့က မလှယျပါဘူး။ အရငျးနှီးဆုံး လူတှဖွေဈတဲ့ ခငျပှနျး၊ ဇနီး၊ မိဘ၊ မိတျဆှတှေေ အကွောကျလှနျမှုနဲ့ ကွုံလာရတဲ့ အခါ အကွောကျပွေ သှားအောငျ ကူညီနိုငျမယျ့နညျးလမျးတှေ ရှိပါတယျ။ ဒီလို ကိစ်စမြိုးနဲ့ ကွုံလာတဲ့ အခါ လူတှကေ ကွောကျနတေဲ့ သူကို ကွညျ့ပွီး ဘာလုပျလို့ ဘာကိုငျရမှနျးမသိ ဖွဈသှား တတျပါတယျ။
1. စိတျတညျငွိမျအောငျ ထားဖို့ ပွောပါ။
အကွောကျလှနျနတေဲ့သူ တဈယောကျကို စိတျတညျငွိမျအောငျ လုပျဖို့က ခကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စိတျငွိမျသှားမှ ပိုမဆိုးလာတော့ မှာပါ။ အကွောကျလှနျနသေူကို စကား တညျတညျငွိမျငွိမျ ပွောပွပါ။ ကွောကျနသေူရဲ့ရှမှေ့ာ ဆူဆူညံညံ ပွောတာတှေ၊ အျောဟဈတာတှေ မပွုလုပျသငျ့ ပါဘူး။
2. သူတို့ရဲ့ခံစားခကျြကို သေးသိမျသှားအောငျ မလုပျလိုကျ ပါနဲ့။
ထိနျးမနိုငျ သိမျးမရအောငျ အကွောကျလှနျခွငျးက အန်တရာယျမရှိဘူး ဆိုရငျတောငျ သူတို့ရဲ့စိတျထဲမှာ ခံစားခကျြတှကေ အနညျးနဲ့ အမြားတော့ ရှိနမှောပါ။ ရငျဘတျအောငျ့တာ၊ မူးတာ၊ အသကျရှုမဝတာ၊ နှလုံးခုနျမွနျတာတှေ ဖွဈလာမှာပါ။ အလှနျအမငျး ကွောကျနသေူကို " အလကားပါ၊ ကွောကျခငျြယောငျ ဆောငျမနပေါနဲ့ " စတဲ့စကားတှေ သှားပွောခွငျးက အကူအညီ မဖွဈစပေါဘူး။ အကွောကျလှနျနသေူကို အားပေးတဲ့ စကားတှပေဲ ပွောသငျ့ပါတယျ။
3. သူတို့ ဘာလိုအပျနလေဲ ဆိုတာကို မေးပါ။
လူတှကေ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ စိတျခငျြး မတူကွပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ လောလောဆယျမှာ သူလိုအပျနေ တာကို ညငျညငျသာသာ မေးသငျ့ပါတယျ။ ကိုယျသိခငျြတာကို ဇှတျအတငျး မမေးလိုကျပါနဲ့။ သူတို့ပွောခငျြတဲ့ စကားကို တိတျတိတျဆိတျဆိတျ နားထောငျပေးတာက သူတို့ကို အားပေးရာရောကျပါတယျ။
4. အခုကွုံနရေတဲ့ အကွောကျလှနျမှပွ မကွာခငျပွီးသှားမှာ ဖွဈကွောငျး ရှငျးပွပါ။
အလှနျအမငျး ကွောကျလနျ့ ခွငျးက တဈနာရီခှဲထကျ ကွာလေ့ မရှိပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ ကွောကျလနျ့မှု အမွငျ့ဆုံး ဖွဈနတေဲ့ အခြိနျက2မိနဈ ကနေ 10 မိနဈ အထိ ကွာတတျ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အလှနျကွောကျနသေူရဲ့ စိတျထဲမှာတော့ ဒီအခိုကျအတနျ့ လေးက ထာဝရ ကွာသလို ခံစားနရေမှာပါ။ ကွုံနရေတဲ့ ပွဿနာက အမွဲဖွဈနမှော မဟုတျကွောငျး ရှငျးပွရငျ သကျသာရာ ရသှားမှာပါ။
5. အကွောကျလှနျခွငျးက အန်တရာယျ မရှိကွောငျး ပွောပွပါ။
တခြို့က အလှနျအမငျး ကွောကျလနျ့ခွငျးကို နှလုံးရောဂါရဲ့ လက်ခဏာ၊ ရုတျတရကျ သဆေုံးနိုငျတဲ့ လက်ခဏာလို့ ထငျကွပါတယျ။ တကယျတော့ မဟုတျပါဘူး။ အကွောကျလှနျနေ သူက ဆေးစဈမှု ခံယူဖူးရငျ၊ ရောဂါကွီးကွီးမားမား မရှိရငျ ရှငျးပွလို့ လှယျပါတယျ။
6. အကွောကျလှနျနသေူနဲ့ ပွိုငျတူ အသကျရှူပါ။
အကွောကျလှနျနသေူက အသကျရှူလညျး မမှနျတော့ ပါဘူး။ အသကျရှူတာ အလှနျမွနျနတေတျ ပါတယျ။ ပွိုငျတူ အသကျရှူပေးခွငျးက တျောတျော ထိရောကျပါတယျ။အသကျကို 1 စက်ကနျ့ကနေ5စက်ကနျ့အထိ ကွာအောငျ ဖွညျးဖွညျးခငျြး ရှူသှငျးရှူထုတျပါ။ အကွောကျလှနျနသေူက အသကျရှူမှနျလာတဲ့အခါ ကွောကျစိတျတှေ အနညျးငယျ ပွယျသှားပါတယျ။
7. လူရှုပျတဲ့ နရောကနေ ခဏလေး ထှကျသှားလိုကျပါ။
အကွောကျလှနျ နသေူတှကေ အဝေးကို ထှကျပွေးသှားခငျြကွ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရရှေညျမှာ ဒီနညျးက သငျ့တျောတဲ့ နညျးတော့ မဟုတျပါဘူး။ ခဏတာ အတှကျပဲ အဆငျပွေ မှာပါ။ ဒါပမေယျ့ လူရှုပျတဲ့ ဈေးဝယျစငျတာ၊ ဘူတာရုံ၊ လယောဉျကှငျးလို နရောမှာဆိုရငျတော့ ရှောငျထှကျသှားတာ ကောငျးပါတယျ။ အလှနျအမငျး ကွောကျလနျ့နတေဲ့အခါ ထိုငျခလြိုကျခွငျးကလညျး အဆငျပွစေမှောပါ။
8. အလှနျကွောကျနသေူကို အာရုံပွောငျးပေးပါ။
သငျ့နံဘေးက လူတှကေ အလှနျအမငျး ကွောကျလနျ့နပွေီ ဆိုရငျ ထိရောကျတဲ့ နညျးလမျး တဈခုရှိပါတယျ။ အဲဒါကတော့ သူတို့ မကျြစိထဲမှာ မွငျတဲ့အရာ ငါးခု၊ ထိတှလေို့ရတဲ့ အရာ လေးခု၊ ကွားရတဲ့အရာ သုံးခု၊ ရှူရှိုကျလို့ရတဲ့ အနံ့နှဈခု၊ အရသာခံစားလို့ရတဲ့ အရာတဈခုကို စဉျးစားပွီး ပွောခိုငျးပါ။ ဒီနညျးက အခိုကျအတနျ့ အားဖွငျ့တော့ အာရုံပွောငျးပွီး အကွောကျပွေ သှားမှာပါ။
အလွန်အမင်း ကြောက်နေတဲ့သူကို အကြောက်ပြေအောင် လုပ်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၈) မျိုး
ကိုယ်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူ တစ်ယောက်ယောက်က ထိန်းမနိုင် သိန်းမရ လောက်အောင် ကြောက်လန့် နေတဲ့အခါ သူ့ကို အကြောက်ပြေအောင် လုပ်ပေးဖို့က မလွယ်ပါဘူး။ အရင်းနှီးဆုံး လူတွေဖြစ်တဲ့ ခင်ပွန်း၊ ဇနီး၊ မိဘ၊ မိတ်ဆွေတွေ အကြောက်လွန်မှုနဲ့ ကြုံလာရတဲ့ အခါ အကြောက်ပြေ သွားအောင် ကူညီနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးနဲ့ ကြုံလာတဲ့ အခါ လူတွေက ကြောက်နေတဲ့ သူကို ကြည့်ပြီး ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ ဖြစ်သွား တတ်ပါတယ်။
1. စိတ်တည်ငြိမ်အောင် ထားဖို့ ပြောပါ။
အကြောက်လွန်နေတဲ့သူ တစ်ယောက်ကို စိတ်တည်ငြိမ်အောင် လုပ်ဖို့က ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ငြိမ်သွားမှ ပိုမဆိုးလာတော့ မှာပါ။ အကြောက်လွန်နေသူကို စကား တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ပြောပြပါ။ ကြောက်နေသူရဲ့ရှေ့မှာ ဆူဆူညံညံ ပြောတာတွေ၊ အော်ဟစ်တာတွေ မပြုလုပ်သင့် ပါဘူး။
2. သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကို သေးသိမ်သွားအောင် မလုပ်လိုက် ပါနဲ့။
ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရအောင် အကြောက်လွန်ခြင်းက အန္တရာယ်မရှိဘူး ဆိုရင်တောင် သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ခံစားချက်တွေက အနည်းနဲ့ အများတော့ ရှိနေမှာပါ။ ရင်ဘတ်အောင့်တာ၊ မူးတာ၊ အသက်ရှုမဝတာ၊ နှလုံးခုန်မြန်တာတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။ အလွန်အမင်း ကြောက်နေသူကို " အလကားပါ၊ ကြောက်ချင်ယောင် ဆောင်မနေပါနဲ့ " စတဲ့စကားတွေ သွားပြောခြင်းက အကူအညီ မဖြစ်စေပါဘူး။ အကြောက်လွန်နေသူကို အားပေးတဲ့ စကားတွေပဲ ပြောသင့်ပါတယ်။
3. သူတို့ ဘာလိုအပ်နေလဲ ဆိုတာကို မေးပါ။
လူတွေက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စိတ်ချင်း မတူကြပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် လောလောဆယ်မှာ သူလိုအပ်နေ တာကို ညင်ညင်သာသာ မေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်သိချင်တာကို ဇွတ်အတင်း မမေးလိုက်ပါနဲ့။ သူတို့ပြောချင်တဲ့ စကားကို တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် နားထောင်ပေးတာက သူတို့ကို အားပေးရာရောက်ပါတယ်။
4. အခုကြုံနေရတဲ့ အကြောက်လွန်မှပြ မကြာခင်ပြီးသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါ။
အလွန်အမင်း ကြောက်လန့် ခြင်းက တစ်နာရီခွဲထက် ကြာလေ့ မရှိပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ကြောက်လန့်မှု အမြင့်ဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်က2မိနစ် ကနေ 10 မိနစ် အထိ ကြာတတ် ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အလွန်ကြောက်နေသူရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ ဒီအခိုက်အတန့် လေးက ထာဝရ ကြာသလို ခံစားနေရမှာပါ။ ကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာက အမြဲဖြစ်နေမှာ မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းပြရင် သက်သာရာ ရသွားမှာပါ။
5. အကြောက်လွန်ခြင်းက အန္တရာယ် မရှိကြောင်း ပြောပြပါ။
တချို့က အလွန်အမင်း ကြောက်လန့်ခြင်းကို နှလုံးရောဂါရဲ့ လက္ခဏာ၊ ရုတ်တရက် သေဆုံးနိုင်တဲ့ လက္ခဏာလို့ ထင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အကြောက်လွန်နေ သူက ဆေးစစ်မှု ခံယူဖူးရင်၊ ရောဂါကြီးကြီးမားမား မရှိရင် ရှင်းပြလို့ လွယ်ပါတယ်။
6. အကြောက်လွန်နေသူနဲ့ ပြိုင်တူ အသက်ရှူပါ။
အကြောက်လွန်နေသူက အသက်ရှူလည်း မမှန်တော့ ပါဘူး။ အသက်ရှူတာ အလွန်မြန်နေတတ် ပါတယ်။ ပြိုင်တူ အသက်ရှူပေးခြင်းက တော်တော် ထိရောက်ပါတယ်။အသက်ကို 1 စက္ကန့်ကနေ5စက္ကန့်အထိ ကြာအောင် ဖြည်းဖြည်းချင်း ရှူသွင်းရှူထုတ်ပါ။ အကြောက်လွန်နေသူက အသက်ရှူမှန်လာတဲ့အခါ ကြောက်စိတ်တွေ အနည်းငယ် ပြယ်သွားပါတယ်။
7. လူရှုပ်တဲ့ နေရာကနေ ခဏလေး ထွက်သွားလိုက်ပါ။
အကြောက်လွန် နေသူတွေက အဝေးကို ထွက်ပြေးသွားချင်ကြ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်မှာ ဒီနည်းက သင့်တော်တဲ့ နည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခဏတာ အတွက်ပဲ အဆင်ပြေ မှာပါ။ ဒါပေမယ့် လူရှုပ်တဲ့ ဈေးဝယ်စင်တာ၊ ဘူတာရုံ၊ လေယာဉ်ကွင်းလို နေရာမှာဆိုရင်တော့ ရှောင်ထွက်သွားတာ ကောင်းပါတယ်။ အလွန်အမင်း ကြောက်လန့်နေတဲ့အခါ ထိုင်ချလိုက်ခြင်းကလည်း အဆင်ပြေစေမှာပါ။
8. အလွန်ကြောက်နေသူကို အာရုံပြောင်းပေးပါ။
သင့်နံဘေးက လူတွေက အလွန်အမင်း ကြောက်လန့်နေပြီ ဆိုရင် ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်း တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူတို့ မျက်စိထဲမှာ မြင်တဲ့အရာ ငါးခု၊ ထိတွေ့လို့ရတဲ့ အရာ လေးခု၊ ကြားရတဲ့အရာ သုံးခု၊ ရှူရှိုက်လို့ရတဲ့ အနံ့နှစ်ခု၊ အရသာခံစားလို့ရတဲ့ အရာတစ်ခုကို စဉ်းစားပြီး ပြောခိုင်းပါ။ ဒီနည်းက အခိုက်အတန့် အားဖြင့်တော့ အာရုံပြောင်းပြီး အကြောက်ပြေ သွားမှာပါ။